Ọkachamara Semalt na-agwa ihe niile gbasara IThemes Security Plugin
Ebe nrụọrụ weebụ na-adighi ike ibuso nje site na ọtụtụ ụzọ. Ndị ọrụ na-emepụta weebụsaịtị WordPress na-ebute ịlụ ọgụ n'ihi ohere a kpaara iji chebe ha. Dị ka iThemes nche si kwuo, ihe karịrị ebe dị iche iche 30,000 ga-ejikọta kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ọrụ nwere paswọọdụ na-adịghị ike nke ndị keyloggers nwere ike iwepụ n'ụzọ dị mfe.
Nchedo weebụ bụ mkpa dị mkpa maka onye nwe ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị ahịa na ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịdaba na ụlọ ọrụ weebụ, na-eme ka azụmahịa nweta aha ọjọọ - decopipe gu10 lamps. Ịnya nchebe bụ ego ka mma karịa ime ihe na-akpata nchebe nchebe. Ndị ọrụ ndụmọdụ iThemes ndị nche nwere ike ịme ka njirimara ndị ọrụ ha dị ike yana ịnye ụfọdụ plugins arụmọrụ njirimara bara uru bụ ndị na - abịa dịka mbipụta n'efu ma ọ bụ nke kachasị elu.
Oliver King, onye ọkachamara na - ahụ maka Semalt , na - ewepụta nchịkọta nke iThemes nche plugin directory.
iThemes nche bụ ìhè dị ka ndị kasị mma WordPress nche ngwa mgbakwunye. IThemes nwere ihe karịrị atụmatụ iri atọ nwere ike inyere gị aka ichebe ebe nrụọrụ weebụ gị megide ụfọdụ egwu egwu nkịtị. Akụkụ dị mkpa nke nke a bụ na iThemes nche na-anapụta ndị ahịa ya ka ha nweta 4.7 ọnụego nke 5. Ngwaọrụ a nwere ihe karịrị nde mmadụ anọ. Iji kọwaa otú iThemes nche plugin na-arụ ọrụ, anyị nwere ike iji atụmatụ ntinye n'efu na nbanye na dashboard ya.
Mgbe ị wụnye iThemes nche ngwa mgbakwunye, ị nweta ọtụtụ nhọrọ nchekwa maka iji na ebe nrụọrụ weebụ gị. Nhọrọ nke mbụ na-echekwa ebe nrụọrụ weebụ gị site na iji ohemesị Brute Force Network Protection usoro iji chebe gị na ebe nrụọrụ weebụ. Ntughari popup a na-enye ọtụtụ nhọrọ gụnyere:
Ebe nchekwa gị
Nke a bụ menu iji nyere gị aka ịmepụta ndabere nke ebe nrụọrụ weebụ gị na ọnọdụ ọ dị ugbu a. Nkwado nwere ike ịgụnye saịtị ahụ, nchekwa data yana faịlụ dị iche iche dị ka faịlụ mgbasa ozi. Ị nwere ike ịghaghachi mgbe ọ bụla na nkwado a oge ọ bụla mgbe ihe na-agahie na nkwenye weebụ.
Kwe Ka Nwelite Mgbasa Ozi
Njirimara a na-eme ka emelite faịlụ wp-config.php na .htaccess gi.
Ịnọ ná Ntụkwasị Obi n'Ịntanet
Njirimara a na-enye ntọala ndabara na weebụsaịtị nke dị iche na plugins na gburugburu nke esemokwu.
Nyere Anyị Aka Ịmeziwanye
Nke a na-enye ohere nchebe ithemesị iji nakọta data ezoro ezo banyere ihe ndị dị iji jiri melite ithemes nche ngwa mgbakwunye.
I kwesiri ịpị onye ọ bụla n'ime ha. Mgbe ị gwụchara, ọ ga - eburu gị gaa na bọtịnụ gị.
Dashboard: Dashboard nwere ọtụtụ ihe nchebe iji nyere gị aka ịnọ n'enweghị nsogbu. Ha na-agụnye Echechila onwe gị, malite, Ọnọdụ Nche (Nke a ga-etinye na Nke kachasị mkpa, Mkpa dị oke ma ọ bụ Ihe kacha mkpa).
E nwekwara Ntọala, Ntọala di elu, Backups na NchNhr Enyemaka.
Ithemes security plugin is a security measure which many websites need to grow well. Ọ dị mkpa icheta ịmepụta ndabere nke saịtị gị tupu igbanye ụfọdụ n'ime atụmatụ ya. Nke a bụ n'ihi na iThemes nche ngwa mgbakwunye nwere ike ịkpalite mmebi mmetụta na saịtị dịka ụzọ weebụ si anabata ọnọdụ dị iche iche. Ogwe nche ahụ na-emepụta ụfọdụ n'ime ihe nzacha spam dị elu na njirimara nkwụsị IP. N'ihi ya, iThemes nche ngwa mgbakwunye nwere ike ịbụ ihe dị oké mkpa ntule maka WordPress website.